पुस्तक समीक्षा: "अक्षरहरुको रङ"मा भेटिएका रङहरु | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पुस्तक समीक्षा: “अक्षरहरुको रङ”मा भेटिएका रङहरु
२०७० कार्तिक ९, शनिबार ०३:५४ गते
फेसबुकमार्फत छाडिएका सीमित कविता अनि कविताका स–साना टुक्राहरु मात्र पढ्ने अवसर पाएकी थिएँ मैले, शेखर विकल्पको । पहिलो पटक उनको कविता पढ्दैमा मेरो मन लुटेको थियो कविताले । भर्खरै मात्र प्रकाशित भएको उनका सुन्दर कविताहरुको संग्रह “अक्षरहरुको रङ” अध्ययन गर्ने सुअवसर पाएँ मैले पनि ।
कसैले देख्यो ?
कालो, रातो, सेतो, हरियो, नीलो, पहेँलो र आदि ।
यी हरफहरु उनै कवि शेखर विकल्पको कवितासंग्रह “अक्षरहरुको रङ” अन्तर्गतको शीर्षक कविता ‘अक्षरहरुको रङ’ भन्ने शीर्षकबाट लिइएको हो । निकै सुन्दर कविताहरुको संकलन गरिएको कवितासंग्रह हो, “अक्षरहरुको रङ ।” आफ्नो जीवनशैली, भोगाइ, वातावरणीय परिवेशजस्ता हरेक विषयवस्तुहरुलाई टपक्क टिपेर अक्षरहरुको सुन्दर माला गाँस्न सिपालु छन्, कवि । उसो त, उनी कवितामा मात्र होइन– गजल, मुक्तकजस्ता साहित्यका अन्य विधामा पनि उत्तिकै अब्बल देखिन्छन् । तर, अझ बढी भने कवितामा नै भिजेको पाइन्छ, उनको कृति “अक्षरहरुको रङ” को अध्ययनपश्चात् ।
कृतिको सुरूवाती कविताहरुमा नै आफ्ना मातापितालाई सम्झेका छन् कविले–
बुझ्नै सक्दिनँ म
किन अटाउँदैन तिम्रो कवितामा
आमाको फाटेको फरिया
मेरा च्यातिएका कापी, किताब
र तिम्रै ननिको दमको रोग ।
“बा, कविता र म” शीर्षकको यस कवितामा कविले आफ्ना बासँग आफ्नो अनि परिवारका समस्याहरु नअटाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैगरी, आमालाई पनि यसरी लेखेका छन् कवितामा–
औँलामा निकोटिन हाँस्दाहाँस्दै
फुक्यो कविले एक अन्तिम बेरंगी डल्लो धूवाँ
जहाँ देखियो बूढीआमाको फुस्रो अनुहार ।
“आमा, धूवाँ र कवि” शीर्षकको कविताबाट ।
कविले बाआमालाई लेखिसकेपछि आफ्नो प्यारलाई पनि कवितामा लेखेका छन् । आफ्नो प्रेमलाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन् उनले–
तिम्रो मन निकै सुन्दर छ
अझ नजर त कति हो कति पारदर्शी
जहाँ फुलेका छन्, मीठा सपना
“प्यारका खातिर यौटा कविता” शीर्षकमा सजिएका यी माथिका लाइनहरु पढिरहँदा कविले आफ्नी प्रेमिकाको बयान खुलेर गरेको पाइन्छ, यहाँनेर ।
त्यस्तै गरेर उनले आफ्नो मृत्युको घोषणापछि आफ्ना मित्रहरुले दुई थोपा आँशु खसाल्दै आफ्नो लासमाथि श्रद्धाको फूल चढाउने छन् भनी भविष्यलाई पनि अड्कलबाजी गरेका छन् । साथै, आफ्नो जागिरे जीवनसँग सडकछापका जीवनलाई पनि दाँज्न भ्याएका छन् कविले यस संग्रहमा ।
वनमा लागेको डढेलोजस्तै गरी मनमा लागेको आगोको हुरीलाई आफ्नी आमाले कसरी निभाउलिन् भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् कविले–
चुहिने छानो पनि जल्ने भयमा
कसरी निभाएर जवाफ देलिन् आमाले
मनमा दन्किएर फैलिएको, आगोको हुरी
कविले “फूल अर्थात् नारी” शीर्षक दिएर नारीलाई फूलको संज्ञा दिएका छन् । कवितामा नारीलाई यसरी व्यक्त गरेका छन् उनले–
फूल आँसु हो
र पनि मुस्काउन सक्छ
फूल संघर्ष हो
जसको वासना कोसौँ माइल पुग्न सक्छ
र त विश्व ब्रह्माण्ड उज्यालो भा’को छ
र सृष्टिको मूल त¤व नै फूल हो ।
लेख्दै जाँदा देशको राजधानीलाई पनि कवितामा समेट्न भ्याएका छन् कविले–
कमलपित्ते जीवन बोकेर यौवनको मोलमोलाइ
र दलाली गर्दैछ रत्नपार्क
राजधानीको प्रख्यात ठाउँ रत्नपार्कको चिनारी दिएका छन् कविले, “काठमाण्डौँ” नामको शीर्षक दिएर ।
उनले प्रणय–दिवस र प्रेमलाई पनि कवितामा लेखेका छन् । साथै, कविसँग कविता नै नभएको कुरा प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो देश दुखिरहँदा कविता लेख्न नसक्ने कुरा बताएका छन् । कविता लेख्नको लागि कुनै विषयवस्तु नै नभेट्टाएको गुनासो छ कविको ।
प्रत्यक्ष कहिल्यै पनि नदेखेको भए पनि तस्बिर देखेर बालाई पुकारेका छन् यहाँनेर–
मैले कहिल्यै नदेखेका
मेरा भित्ताका बालाई सम्झेर
अहँ कसैले सकेन मलाई फुल्याउन
“बा को तस्बिर” नामक शीर्षकमा कोरिएको यो कविता वाचन गरिरहँदा भित्री मन नै कताकता चसक्क दुखेजस्तै भान हुन्छ । कहिल्यै नदेखेर पनि बाको भित्ताको तस्बिर हेरेर बालाई सम्झिएर रोएको र फुल्याउन नसकेको कुरा व्यक्त गर्दै थिए, कवि ।
यसरी कहीँ बाको तस्बिरको कुरा त कहीँ अपहरणको कुरा गर्दै जाँदा कवि फेरि एक पटक आफ्नी प्रियको यादमा ठोक्किन पुगेका छन् । आफ्नी प्रियतमाको नाममा पनि उनले एउटा कविता कोर्न बिर्सेका छैनन् । यसरी सम्झिएका छन्, कवितामा आफ्नी प्रियतमालाई–
जुनेली रातको चन्द्रमा हेरेर
प्रियतमालाई यौटा पत्र कोरौँ लाग्छ
स्वर्णिम सपनाभित्र सुनौलो गुलाफ फुलाएर
बाआमाको अलिना सपना कोरेर
(पृ–५९) यी शब्दहरुबाट पनि यो प्रस्ट हुन्छ कि आफ्नी प्रियलाई सम्झिरहँदा पनि आफ्ना बाआमालाई भने बिर्सन सकेका छैनन् कविले ।
देखे, भोगेका र सुनेका कुरामात्र होइन, कविले कवितामा काल्पनिक कुराहरु पनि गरेका छन् । उनले कवितामा मरूभूमिलाई पनि ल्याएका छन् । जर्जर बगर भनेर भनिने मरूभूमिलाई पनि कविले उर्वर देखेका छन्, अमृतका फूलहरु फुलिरहेका कुराहरु गरेका छन् ।
त्यस्तै गरी शब्दहरु कोरलिरहँदा कविलाई शब्दहरु कोरल्नुको स्पष्टीकरण मागेका कुराहरु बताएका छन्–
ए विकल्प, तैँले शब्द कोरलेर
कस्तो जीवन बाँच्लास् ?
यसरी प्रश्नहरुको वर्षात् भइरहेको छ, अर्थात् स्पष्टीकरणको माग ।
संग्रहको अन्त्यतिर आफ्नो नाममा ठेगानाबिनाको पत्र पठाएको कुरा पनि खुलाएका छन्, कविले । आफूलाई सम्बोधन गरी लेखिएको त्यो ठेगानाबिनाको पत्रलाई पनि प्रस्तुत गरेका छन् उनले ।
प्रत्येक कविता छुट्टाछुट्टै व्याख्या गर्नैपर्ने खालका छन् । सबै कविताहरु एकदमै सुन्दर छन् । तर, कुनै कवितालाई पनि नछुटाई सबैलाई समेट्न सकिनँ, मैले यहाँनेर ।
संग्रहमा जम्माजम्मी ३७ वटा कविता भए पनि कविता क्रमाङ्कअनुसार ३६ वटा मात्र रहेका छन्, यस कृतिमा । एउटा कविता भने क्रमाङ्कभन्दा बाहिरै राखिएको छ । ३६ वटा कवितालाई ३६ मिनेट पनि नलगाइकन पढेर सिध्याउन सकिन्छ । निकै सुन्दर, स्पष्ट, सटीक अनि सरल शैलीमा लेखिएको कविता पढिरहँदा कुनै पट्यार लाग्दो कविता भेट्टाउन असम्भवजस्तै हुनेछ । सबै कविताहरु उच्च कोटिका छन् । यस कृतिभर कहीँ, कतै पनि ब्रेक नलगाइकन, कतै पनि नचिप्लिकन सरासर हिंडेका छन् कवि, कलमको यात्रामा ।
विभिन्न विषयवस्तुलाई टपक्क टिपेर सुन्दर अक्षरहरुको रङले सजाउन सिपालु देखिन्छन्, कवि । उनको यो मीठो शैली, गहन चिन्तन अनि कलमको सुन्दर यात्रालाई लाखलाख शुभकामना छ । आगामी दिनहरुमा अझै सुन्दर अनि झिलिमिली रङहरु भर्न सकोस्, उहाँको कलम अनि अक्षरहरुले । यही छ मेरो कृतिकार शेखर विकल्पलाई शुभकामना । साथै, कृतिले सफलताको शिखर टेक्न सकोस्, “अक्षरहरुको रङ” लाई पनि शुभकामना ।